thitsaroad - YouTube
thitsaroad added to Htee Saing and liked 1 month ago
လိမ္မော်ချိန် - စိုင်းထီးဆိုင် - Duration:3minutes, 8 seconds.
thitsaroad added 1 video to Favorites 1 month ago
ခင်မောင်တိုး - မဟာဆန်သူ | Khin Maung Toe - Mahar San Thu - Duration: 1 hour.
Myanmar Online Entertainment
Khin Maung Toe - Mahar San Thu || ခင်မောင်တိုး - မဟာဆန်သူ album
Please subscribe to our channel for more oldie songs.
thitsaroad likedavideo 1 month ago
Hnin by Thar Htwe - Duration:4minutes, 45 seconds.
Thar Htwe's Hnin, which was used to sing when I was young age.
thitsaroad likedavideo2months ago
Cô gái có bước nhảy không thể rời mắt 1 Shuffle dance Beautiful dance of Chinese | HAYPHET.NET - Duration:2minutes, 16 seconds.
Cô gái Dan Dan và ông già nhảy shuffle dance như một bài tập thể dục đã gây lên 1 hiệu ứng lớn.
thitsaroad added 1 video to Htee Saing2months ago
"Sate Ta Za A Lwam"; Burmese Love Songs by Sai Htee Saing and friends in 1976 - Duration: 55 minutes.
MP3 download link http://www.mediafire.com/?z2g7634fmkou7
This is my collection, audio only video which is dedicated to those who sang, wrote, played, and recorded the songs. Sang by Sai Htee S...
thitsaroad likedavideo3months ago
ဝေးကွာခြင်းကတို့အတွင်းမှာ-ခိုင်ထူး - Duration:4minutes, 50 seconds.
thitsaroad added to Htee Saing and liked4months ago
ဥပေက္ခာလောကသား-စိုင်းထီးဆိုင် - Duration:7minutes, 18 seconds.
thitsaroad likedavideo5months ago
ပ န်းကလေးငို - ဇာလျ န်း၊ ခို င် ထူး- Duration:2minutes, 53 seconds.
ပ န်းကလေးငို
ဇာလျ န်း၊ ခို င် ထူး
ေ န ဝ င် ချိ န်
ကြ က် ဖ ကလေးတွ န် တ ယ် မု န် တို င်းက ထ န်
ဟိုးအ ထဲ န က် န က် တ စ်နေ ရာမှာသ စ် ရွ က် ကလေးများ လွှ င့် လို့ကြွေ
thitsaroad likedavideo 8 months ago
"Is Za Li": Burmese Songs by Khaing Htoo in 1980 - Duration: 1 hour.
Disclaimer: I do not own his songs. Everything belongs to its rightful owners.
No copyright infringement intended. "Is Za Li" Burmese Songs by Khaing Htoo in 1980.
Audio from Casstte tape.
thitsaroad subscribed toachannel9months ago
It offers round-the-clock coverage of latest news an
thitsaroad subscribed toachannel 1 year ago
Myanmar Songs - Channel
Jacob Videoları2- Channel
►► Jacob Videoları adlı kanalın 2. si olarak açılmıştır..
►► Her hafta yeni videolarda buluşmak dileğiyle...ABONE OLUN !
►► Kanalımda her türlü hayvan, köpek, bilgi ve merak edilen konular üzerine v
thitsaroad likedavideo 1 year ago
မျ က် ဝ န်းစ ကား - သားထွေး၊ ငြိ မ်းမိုး- Duration:3minutes, 49 seconds.
မျ က် ဝ န်းစ ကား - သားထွေး၊ ငြိ မ်းမိုး
ညှို့ ယူ ဖ မ်းစား မျ က် လုံးများ နဲ့
ပြုံးရုံ ပြုံးပြ သွား သူရေ တ စ် ချ က် ကလေးလှ ည့် အ ကြ ည့် မှာ
တ စ် သ က် လုံးစွဲ သွ...
NYEINCHAN AYE - Channel
A collection of Burmese oldies so-called Stereo songs from 1970s, 1980s and early 1990s. မြန်မာ စတီရီယို ဂီတ ရုပ်သံ လိုင်း၊ ၁၉၇၀၊ ၁၉၈၀၊ ၁၉၉၀ အစောပိုင်း ခုနှစ်များ ၏ စတီရီယိုတေးဟုခေါ်ဆိုကြသည့် မြန်မာ (ဗ
Europe - The Final Countdown Silent Knight Version Drum Cover by Nur Amira Syahira - Duration:4minutes, 20 seconds.
Please watch: Receive AMAZING LED Light ...
ငါ့ ဘ ဝ - စို င်းခ မ်းလိ တ် ၊ စို င်းထီးဆို င် - Duration:4minutes, 43 seconds.
ငါ့ ဘ ဝ - စို င်းခ မ်းလိ တ် ၊ စို င်းထီးဆို င်
ဆ န္ဒ ရ ယ် လို လား မှု ရ ယ် ထာဝ စ ဉ်မျှော် လ င့် လျှ က်စောင့်နေ လ ည်းကံခေတော့ဝေးေ ရာေ ပါ့ ကွ ယ် လူ တ ကာေ တွ ရီနေ...
ညှို့သူ ခင်မောင်တိုး ၁၉၈၆ - Duration:4minutes, 16 seconds.
ညှို့သူ (2nd Version)
တေးရေး - တင်မောင်လှိုင်
တေးဂီတ - မဇ္စျိမလိူင်း
မျက်သွယ် (၁၉၈၆) သီချင်းခွေ မှ၊ (New Version ဖြစ်သည်။ မူရင်းမှာ ခင်မောင်တိုး ၏ ရှေးဦး ပထမဆုံး အခွေ "ကျေးဇူး...
ဆုတောင်းခဲ့ ဖူးတ ယ် မိ င ယ် - ဆ လို င်းဆွ န် ကျဲ အို ၊ စို င်းထီးဆို င် - Duration:4minutes, 12 seconds.
ဆုတောင်းခဲ့ ဖူးတ ယ် မိ င ယ် - ဆ လို င်းဆွ န် ကျဲ အို ၊ စို င်းထီးဆို င်
မ ကြ င် နာနို င် ရ င် လ ည်းအ ရ င် လို မ စိ မ်းနဲ့ လို့ပြောပါ ရစေ လား မိ င ယ် မ မ က် ဖူးတဲ့ အိ ...
HeilRJ Football Channel - Channel
Official page of HeilRJ Football Channel!
The place where you find the best football videos, specially Lionel Messi and the living legend Ronaldinho.
ပု ဝါ တ စ် က မ်းလ က် တ စ် လှ မ်း- ခို င် ထူး- Duration:5minutes,9seconds.
ပု ဝါ တ စ် က မ်းလ က် တ စ် လှ မ်း- ခို င် ထူး
ဘ ယ် လို ပုံ စံ မျိုးနဲ့ တို့ ကို မြ င် သ လဲ လို့မေးကြ ည့် မိ တ ယ် ဒီတော့ လ ည်းအ ရ င် က လို မ ခ င်တော့ ဘူးမ ဟု တ် လား ဒါတွေ ကို...
ရန်ကုန်သားလေးကျနော်-လွှမ်းမိုး - Duration:3minutes, 38 seconds.
မြန်မာပြည်အနှံ့ လျှောက်လို့သာ ဂစ်တာလေးလဲပိုက်ကာ ရောက်ခဲ့ဖူးတဲ့ မြို့တွေမှာ ရန်ကုန်သားလေးကျနော်ပါ လေယာဉ်ပျံကြီး စီးလို့သာ ဂစ်တာလေးနဲ့လိုက်ခဲ့တာ ဂန့်ဂေါမြို့ရဲ့ တစ်နေရာ ဂစ်တာတီးတဲ့ ကောင်ကလေး
ခိုင်ထူး၊ကိုဂျေတို့ နဲ့ Mooncasters Band ဧ။် စကာင်္ပူရဲ့ နောက်ဆုံးအိပ်မက် - Duration:7minutes, 21 seconds.
Music Concert (Singapore) 12th Oct 2013
ချ စ် ရ တဲ့ သူ - သားထွေး၊ မီ မီ ဝ င်းေ ဖ - Duration:3minutes, 29 seconds.
ချ စ် ရ တဲ့ သူ - သားထွေး၊ မီ မီ ဝ င်းေ ဖ
ချ စ် ရ တဲ့ သူ ရ ယ်
မျ က် လုံးကလေးများ ဝ င့် ကာေ ခ်ါနေ တာကို လှ ည့် ကြ ည့် ပါ ဦးနှ လုံးသား နဲ့ ယှ ဉ် ကာဖွဲ့ နွဲ့ လို့ မပြော...
© ရင်ဂို - အတောင်ပံပါရင်မင်းဆီကို ® Live in SG - Duration:4minutes, 15 seconds.
ေ တးဖွဲ့ -ဇေ ယျာ ( စ တီရီယို)
Whitney Houston - Home (Live South Africa 1994) - Duration:5minutes, 34 seconds.
Whitney Houston sings "Home" (from the Wiz) live in concert in 1994.
Whitney Houston (LIVE) 'Home' w/lyrics - Duration:4minutes, 22 seconds.
Whitney Houston singing 'Home' Live in South Africa. This song has personal meaning to me simply becauseaHome filled with Love & Affection is what I wish for the most. English lyrics/subtitles
thitsaroad added to Favorites and liked2years ago
ခွင့်လွတ်ပါစောငယ်-စိုင်းထီးဆိုင် - Duration:3minutes, 59 seconds.
thitsaroad likedavideo2years ago
ခြင်္သေ့လည်ပြန် - Duration:4minutes.
တေးရေး - စိုင်းခမ်းလိတ်
တေးဆို - စိုင်းထီးဆိုင်
ဝေးလွင့်ခြင်းနိဂုံး ရေး/ဆို ဖိုးချို ၁၉၈၃ - Duration:2minutes, 57 seconds.
သံစဉ်/စာသား/ဖွဲ့ဆို - ဖိုးချို
တေးစု - ဂျွန်သင်ဇမ်း + သျှမ်းလျန် + ဖိုးချို တို့၏ "မင်္ဂလာနေ့မွေးဖွားခြင်း" (၁၉၈၃)
တေးဂီတ - ငြိမ်းချမ်းရေးသံစဉ်
အသံဖမ်း - တိုနီ (လင်း)
ဗမာပြည် ကိုယ်ပိုင်သံစဉ် ဂီတသစ်...
White Kid Sing The Blues In Guitar Shop Like It's Nobody's Business! - Duration:2minutes, 47 seconds.
How to replace trunk lid torsion bars / trunk springs in Ford Crown Victoria - Duration:7minutes,5seconds.
Car isa2002 Crown Victoria (P71 ex police car). The dealer wanted $60 just for the one part so I went toajunk yard and founda1997 Mercury Grand Marquis that hadasimilar setup. The torsion b...
နေ့သစ်-စိုင်းထီးဆိုင် - Duration:3minutes, 10 seconds.
ညကောင်းကင်ရဲ့တေးသမား-ခင်ဝမ်း - Duration: 8 minutes,7seconds.